Fakan-tsary Leverage Body hiantohana ny fiarovana ny mpiasa amin'ny sehatry ny indostria | Vahaolana OMG
Fakan-tsary Leverage Body hiantohana ny fiarovana ny mpiasa amin'ny sehatry ny indostria
Ireo fakantsary dia na aiza na aiza. Isika tsirairay avy dia afaka maka aina ny fiainana isan'andro amin'ny alàlan'ny telefaona. Matetika ny olona no toa manana fihetsika tsara kokoa rehefa fantatr'izy ireo fa mijery azy. Na ny soso-kevitra anaovana olona iray aza dia tiana hitaona ny olona. Angamba, mety tsy hitovy ihany isika rehefa mahita famantarana "CCTV dia mirakitra ny 24 / 7" na dia tsy mirakitra aza ny fakantsary. Ny fakantsary vatana dia ampiasaina amin'ireo masoivoho fampiharana sy hopitaly. Na izany aza, azo ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny fambolena, fitrandrahana, fananganana, ary fitaterana. Ny sehatry ny fitrandrahana sy ny fambolena izay misy loza foana dia azo afenina amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny rafitra WIFI sy GPS.
Ny Kamera Headset Body Worn Camera mora ampiasaina dia afaka mitahiry ny resaka eo anelanelan'ny mpividy sy ny mpivarotra amin'ny fotoana ifanakalozana ary taty aoriana amin'ity horonantsary sy horonantsary noraketana ity dia azo ampiasaina ho porofo. Ireo tantsaha, mpandraharaha, banky, orinasa fiantohana, mpiasan'ny mpamonjy voina ao amin'ny departemanta afo ary na dia ny fanjakana aza dia afaka mampiasa fakantsary vatana hanaraha-maso ny mpiasa azy ary mahazo fampitahorana.
Zava-misy ireto fa misy mahasoa ny fakan-tsary.
2. harena ankibon'ny tany
7. Serivisy elektrika, Gas ary fanadiovana
8. Varotra varotra
9. Varotra varotra
10. Serivisy, fiantohana ary serivisy trano sy trano
Ny indostrian'ny fambolena dia ho lasa manan-danja kokoa noho ny taloha tao anatin'ny folo taona ho avy. Mila hamokatra ny vokatra 70% eto amin'izao tontolo izao ny tany noho ny nataony tao amin'ny 2050 mba hamahana ny fitomboan'ny mponina eto ambonin'ny tany, araka ny filazan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena. Mba hahatrarana io fangatahana io dia mitodika any amin'ny Internet of Things ny mpikaroka sy ny orinasam-pambolena mba hamatsy fikarohana sy fahaiza-manao famokarana lehibe kokoa
Ny tantsaha rehetra dia hahatakatra ny fahasarotana amin'ny fiarovana ny taniny. Amin’ny maha tompon-tany iray, dia tsy fahita ny fananana tany an'arivony maro. Sarotra be ny manara-maso sy miaro ny fizarana rehetra ary manadino ireo mpandika lalàna. Matetika kokoa noho ny tsy, ny mpanota tsy manana finiavana mihitsy. Mora tafintohina any an-tsaha nefa tsy takatra. Na izany aza, indraindray, ny mpangalatra na ny mpanao fihetsiketsehana aza dia hahita ny alehany amin'ny fanananao. Ireto misy torohevitra tsara hanampy anao hanafoana an'io.
• Famantarana fomba tsotra hamehezana ireo mpandika lalàna, mpangalatra ary mpanao fihetsiketsehana manana famantarana manodidina ny faritra manodidina ny taninao.
• Ampahafantaro tsara ny mpiasa ao aminao fa ao anatin'ny asany ny mitatitra asa mampiahiahy na fandikan-dalàna.
• sakana ara-batana Iray fomba iray hamahana azy dia ny fametrahana sakana ara-batana. Mety ho fefy na bara vy izany raha mahatsapa ho fisorohana indrindra ianao.
• Ireo fakantsary sy fakantsary CCTV fakantsary ary fakan-tsary mihetsika ho an'ny vatana no manome porofo
• Ampandehano amin'ny rafitra GPS ny fitaovanao mba hahitana mora
Masinina sy fambolena, tanimboly, amponga lehibe ary lafo ny fitaovam-pambolena, saha ny fitaovam-pambolena, ary ny milina tsy izay mila indraindray indraindray afaka mividy sy mitahiry azy. Ny orinasan-trano fanofana fitaovana dia manamora ny fampidirana ireo fitaovana ireo raha ilaina, fa ahoana ny fomba ahazoanay antoka ny orinasanay sy ny vokatra?
Fahita matetika sy malaza ny rafi-panaraha-maso ny horonan-tsary, na dia mety ho sarotra kokoa ho an'ny mpangalatra aza ny mangalatra traktera mifanohitra amin'ny akanjo ba, ny orinasa mpivarotra rehetra dia mila mahafantatra ny fahavoazan'ny mpangalatra. Ny fakantsary fanaraha-maso dia afaka manara-maso ireo toeram-pambolena sy tanimboly ary saha manodidina ny famantaranandro, eny fa na dia any ivelan'ny birao aza ianao fa te-hijery hatrany ireo rakitsary fakan-tsarin'ny mpiasa ao anaty horonantsary isa-minitra ary koa feo izay tsy zakan'ny CCTV. . Ho fanampin'izany, ny rafi-panaraha-maso dia azo ampiasaina hanaraha-maso ny fifandraisan'ny mpanjifa, hanarahana ny fitantanana vola amin'ny kitapom-bola ary hiantohana ny mpiasa sy ny mpanjifanao rehetra hanaraka ny fenitra azo antoka manodidina ny fitaovana.
Ny fanaraha-maso ny orinasanao amin'ny fambolena dia fomba marani-tsaina hampihenana ny fatiantoka sy hampitomboana ny tombom-barotra. Ny fametrahana fakan-tsary momba ny fiarovana ny toeram-piompiana dia manampy anao hanara-maso izay mitranga rehefa tsy afaka eo ianao.
Ny ray aman-dreny rehetra no tena mampatahotra dia ny zanany tanora no tafiditra amin'ny lozam-piarakodia. Mampalahelo fa ny ray aman-dreny dia tokony ho voahaja. Ny antony mahatonga ny fahafatesan'ny tanora dia ny fahafatesan'ny fiara. Ny fitaovam-pitaterana an-janakao mitazona ny fitaovana fanaraha-maso an'ny cam cam body body mba tsy hijerena ny fahazarany mitondra fiara na hanakana azy ireo tsy mitondra fiara amin'ny alina dia mety hampihena ny mety ho voarohirohy amin'ny lozam-pifamoivoizana. Avy amin'ny hafainganam-pandehanana mankany amin'ny toerana voafaritra tsara, ny ray aman-dreny dia mahazo miditra amin'ny fampahalalana manan-danja mba hiarovana ny zanany. Fakan-tsary miakanjo Mini azo alaina miaraka amin'ny Encryption [Miaraka amin'ny efijery LCD] (BWC060) dia fitaovana tsara ho an'ny ray aman-dreny sy ny orinasa hamantatra ireo mpamily sy zaza tsy marina.
Ny isan'ny mpandeha amin'ny lamasinina, fiara fitateram-bahoaka sy ny serivisy manokana dia mitombo isan-taona ary miantso ny fangaraharana sy fandraisana andraikitra amin'ny daholobe. Ny fampiasana teknolojia lahatsary vita amin'ny vatana dia mihamitombo hatrany amin'ny tamba-jotra fitaterana midadasika ho valin'ireo antso ireo.
Ny teknolojia lahatsary vita amin'ny vatana dia ampiasaina tsara amin'ny fomba telo voafaritra;
1. Ny fitarainana ataon'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny horonantsary horonan-tsary dia ampiasaina fa tsy fangatahana fitarainana an-tserasera mba hamoronana fahombiazan'ny fitaterana manerana ny tamba-jotra fitaterana.
2. Ny mpiasan'ny Courier sy ny serivisy dia mampiasa ny teknolojia lahatsary vita amin'ny vatana ho an'ny antoky ny fahatokiana kalitao ho porofon'ny fandefasana miaraka amin'ny sonia nosamborin'ny fakantsary.
3. Ho fanakan-tena mahomby amin'ny hosoka amin'ny tapakila ary ny fanoherana ny fiaraha-monina.
Virgin Trains no lasa mpandraharaha fiaran-dalamby voalohany tany UK nanome fakan-tsary mitafy vatana hanarona ny olona eo alohany rehetra, ka nahatonga ny fanafihana ny mpiasa latsaka ny antsasany mahery. Ny valin'ny fanadihadiana dia nanambara fa maherin'ny 80% ny mpiasa no mahatsiaro ho voaro amin'ny asany rehefa manao bodycams ary efa ho 90% no hanoro azy ireo ny mpiara-miasa aminy.
Ny fakantsary vatana dia azo ampiasaina hiarovana ny mpiasa miantsena, ny fananana ary ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia misy fiantraikany ratsy sy fepetra manohana ny fampihenana ny herisetra, ny fandrahonana ary ny fanararaotana any am-piasana. Ny fakan-tsary dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ny mpiasa sy ny mpanjifa rehefa tsapan'izy ireo fa saryina izy ireo.
Ny tanjon'ireo fakan-tsary mitazona vatana dia ny hampihenana ny herisetra amin'ny mpaka sary, manome porofom-pifandraisana / hetsika raisina ho fanamafisana ny fiampangana sy hanomezana fomba fijery tsy miangatra sy ara-drariny ny tranga iray, fifaneraserana na asa. CCTV dia fitaovana lehibe izay tsy misy feo izany, fa ny fakantsary vatana dia manolotra fanohanana sy porofo fanampiny.
Ny foibe fivarotana dia afaka mampiasa fakan-tsary amin'ny tarehy ho an'ny tarehy mba hampihenana ny hosoka sy ny halatra. Mampiditra sary ireo olona tiany jerena ny orinasa, toy ny mpivarotra fantatra, mpiasa tsy afa-bela na olona liana, ao anaty rafitra. Avy eo dia niambina ireo olona tao amin'ny fivarotana ireo rafitra ireo. Ny fangalarana fivarotana ihany koa dia miseho ao amin'ny kaonty Checkout satria tsy nahavita ni-scan ny vokatra ho an'ny namana sy ny fianakaviana ny mpamiakanjo. Ireo rafitra, toy ny Stop Lift miaraka amin'ny fakan-tsary fiarovana ary manararaotra ny hakingan-tsaina amin'ny artifisialy mba handefasana fampandrenesana rehefa misy izany.
Misy marika, ohatra, izay tsy hahafinaritra ny mitafy zavatra hafa ankoatra ny fanairana tampoka amin'ny fanairana satria ny fiheveran'ny mpanjifa azy no jerena. Mitovy amin'ny adihevitra momba sy ny fanoherana ny mpiambina ny varotra eo am-baravarana dia fampahatsiahivana ara-batana ny hoe ho mpangalatra fa tsy raisin'izy ireo.
Ao amin'ny tatitra farany, "Biometric Marketing 2019," dia hita fa na eo aza ny fanahiana, ny mpivarotra dia mizaha teknolojia biometrika, ao anatin'izany ny fanarahana ny fitondran-tena sy ny fanekena ny tarehy sy ny feo, ho an'ny dokam-barotra sy ny kendrena fampiroboroboana Ireo rafitra ireo dia afaka mamantatra sy manara-maso ireo mpiantsena amin'ny fivarotana biriky sy morona ary mianatra ny safidiny, toy ny fampiasan'ny mpivarotra an-tserasera cookies. Ny vaovao avy eo dia azo ampiasaina hifaneraserana amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny findainy, takelaka fivarotana na amin'ny fomba hafa.
Ny firongatry ny asan-dahalo sy ny fanafihan'ny mpampihorohoro manerana an'izao tontolo izao dia mitaky fangatahana ho fanatsarana ny paikady fanaraha-maso ny faritra isan-karazany. Ny fakantsary vatana dia manome fomba fijery mitovitovy sy mivantana momba ny hetsika manodidina. Tahaka ny raharaham-barotra misy fikasana ara-batana, ny fangalarana dia tranga fahita matetika izay mandany vola an'arivony, raha tsy an'arivony tapitrisa dolara isan-taona. Ny mpiasa dia tompon'andraikitra amin'ny entana maro nangalatra, fa ho an'ny mpivarotra dia misy ihany koa ny fiahiahiana ny hafa hangalatra vokatra mandritra ny fitaterana. Hamarino fa manana fepetra hentitra fiarovana amin'ny toerana ianao. Ny mpiasa dia tsy maintsy manao fakantsary vatana hanamboarana porofo amin'ny entana nangalatra sy fakan-tsary miaraka amin'ny GPS fanaraha-maso any anaty fiara mba hahitana ny toerana misy ireo fiara nangalatra miaraka amin'ny vokatra.
Nandritra ny taona maro izay, ny teknolojia lahatsary dia nampiasaina hanombatombana ny fisian'ny mpiasa amin'ny karazana voaloto isan-karazany. Helmet-Cam miaraka amin'ny GPS dia teknolojia tsotra iray ary somary lafo vidy hapetraka sy ampiasaina. Ahitana fakantsary horonantsary maivana aza, fomba iray ho an'ny fitaovana momba ny trano fonosana izay ahafahan'ny mpitrandraka hanao asa.
Mazava fa ny rafitra rehetra izay manampy ny mpiara-miasa hifantoka amin'ny asa mahavokatra dia mampitombo ny fahombiazana ary manatsara ny filaminana. Fa ny fisian'ny rafitra fiarovana an-tsarimihetsika efa namboarina izay ampiarahina amin'ny rafitra fanaraha-maso sy ny fitantanana hafa dia afaka manome ny asa fitrandrahana maro izay fitaovana mahery vaika izay afaka manome tombony lehibe amin'ny sehatra hafa koa, toy ny fahombiazan'ny fiarovana sy fanodinana ohatra. Vantany vao tsapan'ny mpitantana ny fahefana amin'ny rantsan-tanan'izy ireo dia mahita fotoana vaovao azo ampiharina izy ireo ary azo antoka azo raisina avy amin'ny fampiasam-bola.
Ny fakan-tsary miorina amin'ny fidirana sy ny fivoahana dia hanara-maso izay miditra na iza no handeha. Ny ankamaroan'ny toeram-pitrandrahana dia manana fiarovana sy kitapom-pananana, ka misy fotoana ampy hahitana mazava tsara ny tarehy. Ny fampiharana ny lalàna OMG dia namolavola ny rafitry ny fanekena ny tarehiny izay misy ny fampitahana ny olombelona mba hahafantarana ny olona sy ny fisorohana ireo olona voarohirohy na olona voatanisa ho mainty hiditra ao amin'ny toeram-pitrandrahana.
Tsy miresaka momba ny vokatra efa tsy afaka izahay. Amin'ny maha-mpividy anao, mila mamantatra ny mpamatsy mety ianao izay manana vokatra sy traikefa misy, ary mila miantoka koa ianao fa ny rafitra voafidy dia efa novolavolaina sy napetraka soa aman-tsara. Sahala amin'ny vokatra fakan-tsary OMN dia manampy ireo mpiasa amin'ny fitrandrahana maka sary mihetsika sy fiarovan-doha misy cam sy GPS mahasoa amin'ny fitadiavana mpiasa tsy hita ao ambanin'ny havoana ary ny GPS dia hizotra amin'ny toerana misy ny mpiasa.
Ny fakantsary vita amin'ny vatana (BWC), fantatra koa amin'ny fakan-tsary amin'ny vatan'ny vatana sy ny horonan-tsary mihetsika, na ny fakantsary azo ampiasaina dia fitaovana fakantsary, horonantsary na rafi-tsary mirakitra. Ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'ny sehatry ny fananganana dia mbola miatrika loza sy olana maro mipoitra. Avy amin'ny fitetezana sy ny fianjerana ary ny fanakatonana ny orinasam-pifandraisan'ny toetrandro amin'ny fitaovana fandoroana sy fitaovana nangalatra, ny tranokala fananganana dia miatrika risika marobe isan'andro. Ny fakantsary vatana dia manome porofo ny zava-niseho ary niaro fitaovana nangalatra.
Famonoana afo ny tranobe fanorenana. Taratra iray avy amin'ny fasika, mpihaza, sigara, tariby elektrika, jiro vetivety ary ny toy izany dia hanamboatra kitay, solvent, fonosana na lasantsy rehetra hita ao amin'ny tranobe fananganana anaty afo. Ny fakantsary vatana noforonin'ireo mpiasa dia miteraka fanairana amin'ny loza ary ny GPS no manome marika ny manampahefana izay mampirehitra afo.
Ny tranokala tsy voarindra dia mety hiteraka fahasimbana tsy fantatra amin'ny fantsona na ny vongan-dronono, ny asa mafana, ary ny halatra / fanendahana fitaovana sy fitaovana. Ny fakan-tsary na fiarovan-dàlana OMG miaraka amin'ny fakantsary no safidy tsara indrindra anaovan'ny mpiasa mandritra ny fifandimbiasany mba hahazoana fiarovana, indraindray ny mpiasa tsy mifankatia ary tsy maniry hiara-miasa ary mamorona herisetra ao amin'ny toeram-piasana, raha fantany fa izy ireo alaina sary miova ny fitondran-tenany.
Ny fanamboarana dia ny fanodinana ny akora na ny singa ho lasa entana vita amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana, laboratoara olombelona, ​​milina ary fanodinana simika. Ny famokarana vaventy no ahafahan'ny famokarana faobe amin'ny fampiasana mpiasa sy teknolojia mandroso. Ny teknikan'ny famokarana mahomby dia ahafahan'ny mpanamboatra manararaotra ny ambaratonga ara-toekarena, mamokatra vondrona mihoatra ny vidiny mora kokoa.
Fantatsika fa araka ny fitsipika ara-toekarena dia maro ny mpiasa no tsy mamokatra. Rehefa mpiasa an'arivony amin'ny toerana iray dia mety misy 100% mpiasa sasany tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ka ny fahazoana fakantsary vatana ho an'ny mpiasa dia hanome data fa tsy mandeha tsara ny mpiasa fa mandray karama isam-bolana. Faharoa, ny fakantsary vatana dia manome porofo ireo mpiasa mandika ny fitsipiky ny orinasa. Fahatelo, ny filaminana no antony lehibe indrindra amin'ny fikambanana, orinasan-tserasera na fitehirizana fakan-tsary amin'ny vatan'ny vatan-dehilahy. Ny fakantsary CCTV dia fitaovana fanaraha-maso taloha fa tsy voarakitra an-peo, fa amin'ny fakantsary vatana, fantatry ny mpiasan'ny tsena ny fahatsapan'ireo mpividy ny zavatra eritreretiny momba ny vokatra-dry zareo.
Ny fakantsarin'ny fiarovana dia ampahany amin'ny fiainana andavanandro. Tapany lehibe amin'ny drafitry ny fiarovana isaky ny fikambanana. Tokony ho ampahany amin'ny drafi-panavotanao koa izany. Fikambanana maro no tsy mahita ny tombontsoa azon'ny fakantsary fiarovana amin'ny lafiny roa. Ny serasera amin'ny fikambanana dia ahitana ny fomba rehetra, na amin'ny fomba ofisialy na amin'ny tsy ara-dalàna, izay anomezana ny fampahalalana, na midina, ary manerana ny tamba-jotra tompon'andraikitra sy mpiasa ao amin'ny orinasa iray. Ireo fomba fiasa isan-karazany ireo dia mety ampiasaina amin'ny fanaparitahana ny fampahalalana ofisialy eo amin'ny mpiasa sy ny fitantanana, mba hifanakalozana ny fihainoana sy ny tsaho na inona na inona. Ka raha toa ka manao fakan-tsary amin'ny vatana ny mpiasa dia mety tsy hiady hevitra ny fampahalalam-baovao ofisialy ka tsy nivoaka toy ny tsaho fotsiny.
Nandritra ny tantaran'ny orinasa amerikana tany am-piandohana, izay niverina 150 taona mahery lasa izay, ny fitantanana amerikana dia orinasa matanjaka "ambany-iho" hentitra. Izay lazain'ny ankamaroan'ny tompona orinasa dia ny lalàna. Raha manana kaomity fitantanana zokiolona ny orinasa, ny paikady amin'ny fanaovana ny zavatra rehetra manomboka amin'ny fivarotana ny vokatra ka hatramin'ny fifampiraharahana amin'ny mpiasa dia hodinihina ao ambadiky ny varavarana mihidy. Raha vantany vao nandray ny fanapahan-kevitra ireo ny mpitantana, dia nangataka ny ambaratonga ambany amin'ny fitantanana hametraka ireo fanapahan-kevitra ireo. Tsy dia niditra firy ny mpiasa. Nanao araka ny nolazaina na nahita asa tany an-kafa izy ireo.
Serivisy elektrika, Gas ary fanadiovana
Ny fananganana herinaratra dia tena mampidi-doza raha ny fahitana azy na dia ny fiheverana kely aza dia mety hahavelona aina. Ny fahaizan'ny fakantsary vita amin'ny vatana satria fanavaozana fandinihana dia manan-danja ho an'ny birao herinaratra. Ny tombony azo amin'ny fahazoana fakantsary vita amin'ny vatana ao amin'ny orinasam-pananganana herinaratra Ampifandraiso ireo solontena mba hanaraka ny fitsipiky ny fiarovana mandritra ny ora fiasany amin'ny toeram-piasana, na dia ny fiheverana ny mpiasa aza dia miteraka fahavoazana tanteraka ho azy ireo. Raha tiana jerena ny tena zava-misy, dia tena ilaina ny manaiky ny fenitra sy ny toro-lalana rehetra. Tazano ireo mpandika lalàna sy olona tsy ankasitrahana ao amin'ny lapan'ny fikambanan'ny herinaratra fa tsy hanadino fotsiny ny fahavoazana, ho fanampin'izany, mba hiarovana azy ireo amin'ny fananganana herinaratra mampidi-doza.
Modely fanavaozana marobe no mitondra ny dokambarotra entona sy ny solika. Ny fikambanan'ny solika sy ny entona any Etazonia dia nanome fakan-tsary vita amin'ny vatana ho an'ny mpiambina sy ny mpiasan'ny taniny. Ny antony ao ambadiky ny fanaraha-maso fakan-tsary dia ny fanitarana ny fahombiazan'ny fiarovana, ny fitandremana hatrany amin'ny mpiasa eny amin'ny saha. Amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny fiarovana sy ny mpiasa eny an-tsaha dia mila mikatsaka tanjona ny fandaminana.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary mitafy vatana amin'ny fanampiana ara-pahasalamana, dia azo atao tombana sy tombana ireo fanjakana ao anaty fantsona tsy misy ilana azy sy ireo fanampiana manokana rehefa mandray sary miadana. Ho hitanao eo noho eo ireo olana isan-karazany sy ny fironany. Ohatra, ny CASA Sanitary Wares Factory, Canada dia nanome fakan-tsary mitafy vatana ho an'ireo manampahaizana manokana aminy sy ireo mpiasa hafa amin'ny ora andraikitr'izy ireo. Nohararaotin'izy ireo ny Kamera mitafy vatana amin'ny manaraka:
• Sakano ny asan'ny mpiasa raha toa ka mitandrina ny fitsipiky ny fandaminana izy ireo na tsy mijery ny fanaraha-maso ny fako
• Miambena amin'ny fako
• Alaivo ny fanadihadiana azo jerena ho an'ny fijerena eny ivelany
• Anton'ny fakantsary amin'ny tsy fahampiana sy ny loza hafa
• Miaro ny mpandika lalàna sy ny olona tsy mankasitraka amin'ny toerana eo an-tsaha
• Sakan'ny efijery ny mpiasa raha manaraka ny fitsipiky ny fikambanana izy na tsia
• Mahazo sary ny sehatry ny famokarana entona
• Fitaovana mifehy ny fako
• Manalavitra ny fakana sy manapotika
• Mamela ny famerenana amin'ny finday ho an'ny fijerena eny ivelany
Serivisy, fiantohana ary serivisy trano sy trano
Ny fikambanana mifandraika amin'ny vola toy ny banky dia raisina ho toy ny fananganana azo antoka indrindra eto an-tany. Isika dia manome vola ny vola miditra sy ny firavaka ary ny arsiva manan-danja amin'ny alalan'ny miankina amin'izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny firafitry ny fandaharana horonantsary voafidy dia fototra ho an'ireo fikambanana ara-bola ireo. Miaraka amin'ny fivoarana ankehitriny amin'ny fanavaozana mandroso sy ny fomba fijerin'ny IP, maro ny banky manantena hanampy ny fahaizan'ny firafitry ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny loharanom-baovao amin'ity fanavaozana vaovao ity. Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana sy ny fakantsary fakana sary CCTV miaraka amina famotopotorana sary mihetsika, ohatra, ny fanekena ny tarehy dia mampifanaraka ny olan'ny fanararaotana amin'ny banky amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fifanakalozana amin'ny fizika ary ny sarin'ireo mpandika lalàna. Ity angon-drakitra ity dia mahasoa ny mahita ireo meloka ary manampy amin'ny fiantohana ny kaonty client. Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia afaka mampivoatra ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny banky. Arak'izay azo antoka fa ny banky dia, ny mpanjifa bebe kokoa. Ny firafitry ny sary mihetsika mahomby amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mihetsika amin'ny alàlan'ny fakan-tsary sy ny fakan-tsary CCTV manaporofo fa tena manampy tokoa. Ireo fakan-tsary niakanjo akanjo dia nifindra ho lasa sombin-tsasaky ny birao tsirairay. Saika ny orinasa tsirairay dia manandrana manitsy izany amin'ny fandinihan'ireo mpiasa azy. Toy izany koa, ny masoivoho fiantohana dia mikasa ny hampiasa horonantsary horonantsary tratra tamin'ny ora nitrangan'izany mba hanehoana na tsy tiana adidy, ary hanao asa an-keriny mihitsy aza izy ireo mba hiezaka hampiasa horonantsary fandraisan'ny olona iray ao an-tranony na any an-toerana. mba hampisehoana fa nanitatra ny ratrany ilay olona tsirairay. Amin'ity fomba ity, ny fampiasana ny fakan-tsary amin'ny vatana dia manolotra vola be avy amin'ny fikambanana satria ny fakantsary amin'ny vatana dia manaporofo raha mahafeno fepetra ireo mpiasa ity na tsia. Io zavatra io no manaporofo ny masoivoho fiantohana amin'ny fampiasana ny fakantsary vatana.
Ny tombony azo amin'ny fakan-tsary mifono vatana ao amin'ny Banks sy fikambanana mifandray amin'ny vola:
• Ireo banky dia tsy mitsahatra mifantoka amin'ireo mpandika lalàna izay mitady fametrahana lehibe. Ny fandefasana fakana sary fakan-tsary azo atao tsara indrindra any amin'ny banky dia mety ny halaviran'ny ala.
• Noho ny fangalarana sy fanararaotana horonantsary voatanisa azo raisina dia azo ampiasaina hamantarana ireo olona voarohirohy.
Ny matihanina trano izay miambina mitandrina ny filaminana dia miambina hatrany amin'ny sehatry ny asan-jiolahy.
Hanao rameva vatana ve ianao? Nifangaro fihetseham-po tamin'io fanontaniana io ny mpanao fampiharana. Mahatsiaro ny tenin'i Hinkel dia nilaza fa mety ho voasakana ny mpanafika azy raha nanao fakan-tsary nefa tsy voatery. Tsy saro-kenatra izy tamin'ny fisehoana ny mombamomba azy na nanome kopia avy aminy fahazoan-dàlana. Ho an'ny olona toa azy izay toa tsy matahotra ny hozahazava, mety hisy akony amin'ny fihetsiny ve ny fitaovana fakana feo toy ny vatana? "Heveriko fa ny fepetra fisorohana sy ny fianarana ny fomba tsy hahatongavanao ny tenanao amin'ny toe-javatra ratsy dia zava-dehibe kokoa," hoy i Hinkel, ary nampiany fa manome fiovana maharitra lavitra ny fiofanana momba ny fiarovan-tena sy ny fanabeazana momba ny fiarovana fa tsy tokony hampiasaina amin'izao fotoana izao. "Heveriko fa mila manomana ny sainao ianao."
Azo alaina amin'ny: https://www.pinnacleresponse.com/body-worn-cameras-for-rail-transportation-and-logistics
CONTRIBUTOR, S., 22 APRILY 2019. STORES NRF'S MAGAZINE. [Online]
Azo alaina ao: https://stores.org/2019/04/22/captured-on-camera/
Eoropa, LM, Jolay 5, 2017. LPM. [Online]
Azo alaina amin'ny: https://losspreventionmedia.com/body-worn-camera-policy-retailers/
Johnson, C., nd Referansa ho an'ny orinasa. [Online]
Azo alaina ao: https://www.referenceforbusiness.com/encyWiki/Clo-Con/Communication-in-Organizations.html
Rebecca Webb, Sep 26, 2017. Ny risika mazava [Online]
Azo alaina amin'ny: https://www.clearrisk.com/risk-management-blog/7-risks-wholesaler-must-prepare-for
Security, R., nd nahazo fiarovana amin'ny valiny. [Online]
Azo alaina amin'ny: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/the-true-cost-of-vehicle-tracking
Fakan-tsary Leverage Body hiantohana ny fiarovana ny mpiasa amin'ny sehatry ny indostria no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin